eNasha.com - निर्माताबीच घमासान
नेपाली चलचित्र सबैभन्दा बढी कहाँ चल्छ ?
विश्वज्योति सिनेमा हलमा ।
विश्वज्योति सिनेमा हलको नेपाली चलचित्र उद्योगमा कस्तो महत्व छ ?
यो हलमा लागेको सिनेमाले गर्ने व्यापार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर हुने व्यापारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यही हलले उठाउने गरेको छ ।
यी दुइ प्रश्नोत्तर उद्योगमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् । त्यसैले त यो हलमा आफ्नो सिनेमा लगाउन पाउनु भनेको निर्माताको ७५ प्रतिशत लगानी सुरक्षित हुनु हो । त्यही भएर निर्माताहरु यस हलमा सिनेमा प्रदर्शन गर्न टाउको समेत फोड्न बेर लाउँदैनन् ।
हिजो शुक्रबार जीवनदाता र मर्यादा दुवै चलचित्रबीच यस हलमा आफूले सिनेमा चलाउन पाउनु पर्छ भन्ने दाबी गर्नाले दुवै पक्षका निर्माताबीच तीव्र विवाद हुन पुगेको थियो । सिनेमा हलले जीवनदातालाई छाडेर मर्यादा चलाउने भएपछि जीवनदाताका निर्माताहरु चलचित्र निर्माता संघको शरणमा पुगे । संघले जीवनदाताको पालो मिचिन पुगेको भन्दै विश्वज्योति सिनेमा हलसँग वार्ता गरी समस्या सुल्झाएको छ ।
त्यसो त कुनै चलचित्रको पालो आएको बेला अर्को चलचित्रले पालो मिचेर सिनेमा प्रदर्शन गर्ने शैली नयाँ चाहिँ होइन । बेलाबखतमा यस्ता क्रियाकलाप भई नै रहन्छन् । यही समस्या देखेर २०६० सालको जेठ महिनामा चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र हलविरुद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको थियो । जसमा नेपाली चलचित्र निर्माताहरुले कुनै पनि सिनेमा हललाई नेपाली सिनेमा नदिने घोषणा गरेका थिए ।
तर सिनेमा हलहरुको माउ संस्था नेपाल चलचित्र संघ र निर्माताहरुको माउ संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता संघबीच दुइ पक्षीय समझदारी भएपछि चलचित्र निर्माता संघमा भएको दर्ता र सेन्सर बोर्डले गरेको सेन्सर मितिका आधारमा चलचित्रले प्रदर्शनीका लागि हल पाउने निर्णय भएपछि विवाद टुङ्गिएको थियो ।
तर अहिले जीवनदाता चल्ने बेलामा प्राविधिक कठिनाई भनी दुइ सातासम्म सिनेमाको प्रिन्ट विश्वज्योति हललाई उपलब्ध नगराएको भन्दै हलले अर्को चलचित्र मर्यादा चलाउने भएपछि जीवनदाताका निर्माता सुशील पोखरेल निर्माता संघको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् ।
निर्माता संघ र विश्वज्योति हल तथा दुवै चलचित्रका निर्माताबीच भएको एक समझदारीपछि यो समस्या समाधान भएको छ । अब आज शनिबारदेखि जीवनदाता प्रदर्शनमा आउने छ भने मर्यादाका लागि अर्कै छुट्टै बैठकपछि निर्णय गरिने निर्माता संघका अध्यक्ष अशोक शर्माले इनशाडटकमलाई बताएका छन् ।
हल्ला रिलिज अभिनेता प्रविधि सेक्स सेलेब्रिटी समारोह सुटिङ पेज थ्री अभिनेत्री